मन्त्री पद नपाएकी प्रचण्डकी बुहारी बिनाले पाईन् कसैले सोँच्दै नसोँचेको यति ठूलो जिम्मेवारी ! - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
मन्त्री पद नपाएकी प्रचण्डकी बुहारी बिनाले पाईन् कसैले सोँच्दै नसोँचेको यति ठूलो जिम्मेवारी !
मन्त्री बन्न नपाएकी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुहारी बिना मगरलाई ठूलो चिठ्ठा परेको छ । उनलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको हो ।
सुदूरपश्चिममा सबैको चित्त बुझाउन माओवादीले ६ जनालाई पार्टीको सहइन्चार्ज बनाएको छ । यसअघि माओवादीले लक्ष्मी दत्त जोशी र तारामान स्वाँरलाई सहइन्चार्ज बनाएकोमा फेरि ४ जना सहइन्चार्ज थपेको हो । जसमा प्रचण्डकी बुहारी बिना मगर समेत रहेकी छन् ।
पछिल्लो समय थपिएकामा बिनासँगै नेपबहादुर चौधरी, त्रिलोचन भट्ट र वीरमान चौधरी रहेका छन् । भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत हुन् । यस्तै अध्यक्षमा शरद्सिंह भण्डारी र सचिवमा देवीलाल चौधरी रहेका छन् । यस्तै इन्चार्जमा खगराज भट्ट यसअघि नै चयन भइसकेका थिए ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रले नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अन्तर्राष्ट्रिय विभागको जिम्मेवारी दिएको छ । पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्वको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका श्रेष्ठलाई अन्तर्राष्ट्रिय विभागको जिम्मेवारी दिइएको हो।
यसअघि श्रेष्ठलाई प्रवास समन्वय विभागको जिम्मेवारी दिइ अन्तर्राष्ट्रिय विभाग दिइएको थिएन । तर हाल आएर माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय विभागको जिम्मेवारी पनि दिएको हो ।
यस्तै उपप्रमुखमा सुरेन्द्र कार्की रहेका छन् । यस्तै प्रवास समन्वय समितिको सहइन्चार्जमा लक्ष्मण पन्त रहेका छन् । अध्यक्षमा भने यसअघि नै ओम शर्मा चयन भइसकेका छन् ।
माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा रहने सदस्यहरु भने टुंगो लगाइसकेको छैन । तर त्यसका लागि यसअघि नै पार्टी निकटका डिप्लोम्याट र विदेश मामिलाका जानकारहरुको सूची तय गरिसकेको छ । सो सूचीबारे पार्टीबाट निर्णय नहुँदै बाहिरिएको थियो ।
माओवादी पार्टी कार्यालय स्रोतले श्रेष्ठलाई अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको जानकारी दियो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बन्नुअघि पनि श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय विभागको नेतृत्वमा थिए ।